कम्पनी परिचय - Xintianda प्याकेजि्ग
तपाइँ एक आगामी घटना, स्टोर खोल्न, उत्पादन प्रक्षेपण, वा एक महत्वपूर्ण ग्राहक बैठक को लागी पेशेवर प्याकेज पदोन्नति को आवश्यकता छ, Xintianda एक पेशेवर निर्माता हो तपाइँको व्यवसाय मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
2011 को वर्ष मा स्थापित ， Xintianda प्याकेजि packaging्ग प्याकेजि products्ग उत्पादनहरु, जस्तै उपहार बक्स, उपहार झोला, प्रदर्शन कार्ड, लेबल र उपहार products.Our उत्पादनहरु को सबै प्रकार को रूप मा उत्पादन को सबै प्रकार मा उत्पादन मा विशेषज्ञता प्राप्त छ। , कपडा र जुत्ता आदि खुद्रा मा उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला। हामी रीसायकल सामाग्री र पर्यावरण मैत्री मुद्रण मसी प्रदान गर्दछौं। आकार/रंग/संरचना सहित सबै कुरा तपाइँको आवश्यकता, OEM/ODM उपलब्ध को रूप मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। हाम्रो मिशन हाम्रा ग्राहकहरु लाई हाम्रो व्यावसायिक निर्माण संग अर्को स्तर मा आफ्नो रचनात्मक विचारहरु लाई लिन को लागी हो।
जुनसुकै उद्योगमा तपाइँ हुनुहुन्छ, तपाइँ सबै चीज पाउन सक्नुहुन्छ तपाइँ मात्र तपाइँको ब्रान्ड को बढावा दिन को लागी मात्र सजिलै संग तपाइँको ब्यापार चलाउन को लागी आवश्यक छ। अनुकूलन योग्य मार्केटि essential अनिवार्य बाट ब्रान्डेड परिधान सम्म, व्यक्तिगत प्याकेजि to्ग को स्टैंडआउट signages- हामी त्यो सबै गर्न सक्छौं र सबै भन्दा राम्रो मूल्य को लागी।
हाम्रो कारखाना Chengyang जिल्ला, क़िंगदाओ, चीन मा स्थित छ, क़िंगदाओ Jiaodong एयरपोर्ट को बारे मा २० मिनेट।
ग्राहकहरु को संतोषजनक हाम्रो जीवन हो! हामी उच्च प्रभावी लागत, नाजुक गुणस्तरीय, छिटो र कुशल वितरण को लागी पहिलो दिन बाट सबै ग्राहकहरु लाई सेवा को लागी प्रयास गरीरहेका छौं! हाम्रा धेरै ग्राहकहरु लाई दस बर्ष भन्दा बढी को लागी हामी संग व्यापार गरी रहेको छ। यो वास्तविक मान्यता र हाम्रो लागि एक ठूलो उपलब्धि हो!
जब तपाइँ एक प्याकेज उत्पादन छान्नुहुन्छ, तपाइँ निजीकरण विकल्पहरु को यसको विस्तृत श्रृंखला को लागी पूर्ण पहुँच पाउनुहुन्छ। आकार, आकार, सामाग्री, र समाप्त छनौट बाट - त्यहाँ अनन्त संभावनाहरु तपाइँको लागी पर्खिरहेका छन्।
कुनै पनि बजेट को लागी प्याकेज।
किन सस्तो प्याकेज को लागी बसोबास जब तपाइँ पेशेवर सेवाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ कि हामी प्रस्ताव गर्न को लागी? हामी किफायती दर मा उच्च ग्रेड गुणस्तरीय ग्यारेन्टी। जब तपाइँ थोक मा खरिद गर्नुहुन्छ तपाइँ अझ धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापक डिजाइन उपकरण।
डिजाइन अनुभव को जुनसुकै स्तर तपाइँ संग छ, हाम्रो डिजाइनर यो मन मा तपाइँको दृष्टि संग verisimilitude देखाउन सजिलो बनाउँछ। यदि तपाइँसँग अझै सम्म एक डिजाइन छैन, हामी स्वतन्त्र रूपमा डिजाइन गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। हामी पनि कुनै पनी प्राविधिक त्रुटिहरु को लागी तपाइँको डिजाइन फाइल को समीक्षा गर्न सक्छौं, नि: शुल्क!
Xintianda प्रदर्शन कार्ड को लागी व्यापार शुरू भयो;
Xintianda विदेशी निर्यात व्यापार शुरू;
Xintianda एसजीएस सामाजिक लेखा परीक्षा पारित;
Xintianda केहि नयाँ मेसिनहरुको स्वामित्व र उपहार बक्सहरु र झोलाहरु को लागी उत्पादन क्षेत्र को विस्तार गरीयो;
Xintianda FSC प्रमाणपत्र पारित;
Xintianda BSCI प्रमाणपत्र पारित;
हाम्रो टीम एउटा ठूलो परिवार हो। हामी सबै एक परिवार को सदस्य को रूप मा व्यवहार र सबै भन्दा राम्रो काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्दछौं। हामी उनीहरुको काम मात्र होइन तर उनीहरुको जीवन को बारे मा ख्याल राख्छौं; हाम्रा धेरै कर्मचारीहरु १० बर्ष को लागी हामी संग काम गरीरहेका छन्! हामी समय समयमा टीम निर्माण गतिविधिहरु टीम सामंजस्य सुधार गर्न को लागी।
सामाजिक उत्तरदायित्व र नैतिकता
हामी विश्वास गर्छौं कि एक वास्तविक व्यवसाय समकालीन नाफा को बारे मा मात्र होईन तर विश्वास र दिगो विकास को बारे मा अधिक छ। हामी सबैलाई थाहा छ कती महत्त्वपूर्ण छ कि यो पर्यावरण मा हाम्रो प्रभाव लाई कम गर्न को लागी हो। धेरै व्यवसायहरु अब आफ्नो उत्पादनहरु को डिजाइन र उत्पादन को नयाँ तरीकाहरु संग सुधार गरीरहेका छन्, उनीहरुको कार्बन र वातावरणीय पदचिह्न कम गर्ने प्रयास, जबकि एक साथ लागत मा बचत। हामी सँधै ग्राहकहरु लाई पुनर्नवीनीकरण र ईसीओ मैत्री सामग्री विकल्प प्रदान गर्दछौं, र सोर्सिंग र नयाँ नवीन सामग्री मा अध्ययन मा कहिल्यै रोकीएको छैन। र हामी पक्कै पनि चीनी सरकार द्वारा गरीएको फोहोर वर्गीकरण को वकालतकर्ता हो, प्रशिक्षण हाम्रो कारखाना को सबै सदस्यहरु को लागी गरीरहेको छ, यो हाम्रो संस्कृति को एक हिस्सा बन्छ।
हामी नियमित टीम निर्माण गतिविधिहरु र सबै सदस्यहरु को लागी भावनात्मक प्रबंधन पाठ्यक्रम छ। जीवन बाट बिभिन्न दबाबहरु को अगाडि, विशेष गरी कोविड १ after पछि, हामीले यो सुनिश्चित गर्न को लागी धेरै जरूरी छ कि हाम्रा मानिसहरु भावनात्मक स्वास्थ्य छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि तपाइँ हाम्रो ईमानदारी र विशेषता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ!